Dacwada Badda: Taariikhda Muranka Badda ee Soomaaliya iyo Kenya iyo Natiijada – Goobjoog News
Dacwada Badda: Taariikhda Muranka Badda ee Soomaaliya iyo Kenya iyo Natiijada
Waxaa maanta Hague ka furmaya dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya, dacwadan oo 4 maalmood socon doonta waxaa lagu wadaa in dal waliba uu labo maalin hadlo, si dhageysiga kadib maxkamadda ay go’aan uga gaarto, waxaa xusuus mudan in go’aankaas maxkamadda aanan racfaan laga qaadan karin oo uu yahay mid kama dambeys ah.
Soomaaliya oo dawcada maxkamadda ka furtay, waxaa ay kalsooni buuxda ay ku qabtaa guusha dacwada, waayo badda waxaa uu xigaa dhulkeenna berriga ah, waxaa matalaya dalkeenna qarreenno caalami ah iyo xeer ilaaliyaha qaranka, waxaa kaloo la diray dadweyne kale iyo khubaro uu ku jiro Faarax Qarre si korjoogayaal uga noqdaan dhageysiga dacwada.
Maxkamadda Cadaaladda, war saxaafadeed ay soo saaray bishii May ee sanadkan waxaa lagu sheegay in maxkamadda ay ku dhageysan doonto dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya Peace Palace ee magaalada Hague, Soomaaliya ayaa dooneysa xadeynta cabbirka qalfoofta qaaradda ee badweynta ka xiga fogaan ka durugsan 200 oo Meyl badeed-u dhiganta- (370km) ee ka baxsan biyaha Soomaaliya.
Maxkamadda waxaa ay sidoo kale sheegtay in labo wareeg ay tahay dhageysiga dacwada badda:
Wareegga 1aad: Isniinta 19-ka, 10: Subaxnimo ilaa 1:00 Duhurnimo, waxaa la dhageysan doono dalka Kenya, Talaadada oo 20-ka ah, saacadaha 10: subaxnimo ilaa 1 duhurnimo, waxaa la dhageysan doonaa dalkeenna Soomaaliya,
Wareegga 2aad: Arbacada 21-ka, Saacadaha 4:30-6-da Galabnimo waxaa la dhageysan doonaa dalka Kenya halka dalkeenna Soomaaliya la dhageysan doono Jimcaha 10 -11:30 subaxnimo.
Soomaaliya waxaa qareenno u ah Paul Reichler ka tirsan Abuukataal ku bahoobey Foley Hoag LLP ee magaalada New York iyo Qareen kale oo caalami ah oo Faransiis Prof Allain Pellet halka dalka Kenya ay horkacayaan qarreenno Kenyaan iyo Ajaanib isugu jira waxaa ka mid ah Prof Payam Akhavan (American), Prof Vaughan Lowe QC (British), Prof Alan Boyle (British), Prof Mathias Forteau (French) iyo Ms Amy Sanders (British).
Dalka Kenya ayaa ku doodaya lahaanshiyaha dhul badeed lagu qiyaasay ilaa 100,000km2 oo ku dhaw berriga Soomaaliya, halka Soomaliyana ay isla dhulkaas sheeganeyso in ay biyaheeda ka mid yihiin.
Dhulkan la isku heysto ayaa la sheegay in ay ku jiraan Gaas iyo Saliid, dowladda Kenya ayaa dhulkaas heshiis kula gashay shirkado shisheeye in ay ka baaraan shidaal, ilaa 44 jeer ayaa Gaas iyo Saliid laga baaray goobtaas lagu murnasan yahay, shirkadaha baaritaanka ka sameeyay ee Kenya ay heshiiska la gashay waxaa ka mid ah Total, Eni iyo PanContinental. .
Soomaaliya ayaa ka carrootay heshiisyada dalka Kenya iyo shirkadaha shidaalka la gashay ee baddeena lagu baaryo, waxaa ay dacwad u gudbisay Maxkamadda Cadliga Aduunka, labada dal ayaa isla gartay in koox weliba ay dacwadeeda hordhigto qareennada maxkamadda cadliga adduunka.
Soomaaliya ujeedadeeda waa in la xadeeyo badda iyo dhulka ku dhaw halka Kenya ay dooneyso in sameeyo xariiqin badda ah.
Waa markii ugu horreysay ee Soomaalida gar-qaad weydiistaan Maxkamadda cadliga adduunka, haddii kiiskan aanu ku guuleysanno, waxaa ay taasi horseedi doontaa in aan mar kale isla maxkamadaas aadno si aan uga furno kiisaska muranka dhulka ee nagala dhaxeeyay dalalka Yemen, Itoobiya iyo Kenya.
Sooyaalka Muranka Badda Ee Soomaaliya Iyo Kenya:
April 11, 1963: Soomaaliya ayaa aqoonsatay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ halka Kenya ayaa sidaa sameysay April 19, 1965-tii.
April 7, 2009: Dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa Heshiis is afgarad oo Badda ku saabsan ku gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Is afgaradkan oo ay saxiixeen wasiirka qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdiashur iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Moses Wetang’ula ayaa waxaa lagu sheegay in labada dal ogolaadeen xadeynta cabbirka qalfoofta qaaradda ee badweynta ka xiga fogaan ka durugsan 200 oo Meyl badeed oo u dhiganta( (370km), oo weliba u gudbniyaan guddiga xadeynta iyo in la calaamadeeyo si rasmi ah biyaha lagu muran san yahay ee ee Badweynta ka xiga fogaan ka durugsan 200 oo Meyl badeed-u dhiganta-( (370km) ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya iyadoo la raacayo sida ku qoran qawaaniinta caalamiga ah ee qaramada midoobey…heshiiskaas oo hadda taariikhda galay, waxaa qeylo-dhaan ka keenay shacabka Soomaaliyeed oo badankood ku doodeen in baddii Soomaaliya La iibsaday, waxaana eedda dusha laga saaray Cumar Cabdirashid oo ra’isul wasaare ahaa dalka xilligaas iyo wasiirka saxiixay oo ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame.
August 28, 2014: Dowladda Soomaaliya ayaa dacwad ka dhan dalka Kenya, kuna saabsan muranka badda u gudbisay Maxkamadda Cadliga Aduunka ee hoos tagta Qaramada Midoobey si loo xadeeyo badda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya.
September 19, 2016: Waxaa The Hague ka bilowday dhageysiga dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya, waa labo wareeg oo labada dal la dhageysan doono, si markaa ka dib maxkamadda go’aan u gaarto.
Maxkamadda Cadaaladda Aduunka (International Court of Justice):
Maxkamadda waxay ka koobantahay 15 Garsoore oo ay soo doorato qaramada midoobay iyo goloaha ammaanka muddo 9-sano ah, Xilligan waxaa guddoomiye ka ah Ronny Abraham halka uu guddoomiye ku xigeen ka yahay nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdulqawi Axmed Yusuf.
Shir Dib u Heshiisiin Ah Oo Ka Furmay Magaalada Marka